Command & Conquer (C&C) ကို သိတယ်မလား အဲ့လိုမပြောရင် ရွှေတူးစစ်တိုက်ကို မှတ်မိကျမယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကွန်ပျူတာဂိမ်း ခေတ်မစားခင် အချိန်တုန်းက PlayStation (P1) ဆိုင်တွေမှာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ကစားခဲ့ကြတဲ့ RTS ဂိမ်းလေး။
အဲ့ချိန်တုန်းက Multi-player ဆိုတာ JoyStick နဲ့ပဲ ကစားကြတာဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့တယောက် ဖိုက်ချင်ရင် TV ၂ လုံးဆက်၊ ကိုယ်ကျွမ်းရင်ကျွမ်းသလို နယ်ချဲ့ ပိုက်ဆံများများရှာ၊ အင်အားကြီးလာတာနဲ့ သူငယ်ချင်း နယ်နိမိတ်ထဲ ဝင်တိုက် အနိုင်ယူရ ကစားရတာ အရသာရှိတာပါ။
Single-player ဆော့ရင်လည်း မှတ်မိသေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့က (တြိဂံ ၊ အဝိုင်း ၊ အမြောက်၊ လေးထောင့်) ကို ၁ ၊ ၂ ၊ ၃ ၊ ၄ ယူပြီး ပိုက်ဆံခိုးရင် ၁၁၄၂၂၂ နှိပ်ပြီး Cheat တယ်။ စာဖတ်သူတွေကို အခုလို မိတ်ဆက်နေတာ Command & Conquer ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Red Alert ခေါ်တယ်ပေါ့။
အဲ့တုန်း Russia ၊ Ukraine တွေက အသင်းကြီး England ၊ Germany တို့ဆိုတာ ဂိမ်းထဲမှာ ယှဥ်ကြည့်လိုက်ရင် Tesla Coil ၊ Heavy Tank ၊ Super Tank လို ၂ လုံးပြူးတင့်ကား၊ T92T Tesla Tank ၊ V2 Rocket Launcher လို တာဝေးပစ် Tank တွေနဲ့ လျှပ်စစ်တင့်ကားတွေ မပါခဲ့ဘူး (နည်းပညာကွာတယ် ပြောရမယ်ပေါ့)
ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက် Red Alert ဂိမ်း Trivia လေးကို ပြောပြတာပါ။ ဘောဒါတွေနဲ့တိုက်ရင် Random ရွေးတာမှန်ပေမယ့် အသင်းကြီးကျရင် ကံကောင်းတယ်လို့ တွေးခဲ့ပေမယ့် သူ့နိုင်ငံနဲ့သူ ကစားလို့ ကောင်းပါတယ်။
History လေးနွေးရရင် C&C ကို ဖန်တီးခဲ့တာ Westwood Studios ဖြစ်ပါတယ်။ Red Alert အပြင် Command & Conquer: Generals RTS ဂိမ်းရဲ့ Original Creator လို့လည်း ပြောနိုင်သလို PlayStation ခေတ်တုန်းက Red Alert အပြင် Tiberian Dawn ၊ Expansion Packs တွေဖြစ်တဲ့ Covert Ops, Counterstrike နဲ့ Aftermath စီးရီးတွေလည်း ထွက်ရှိခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ Red Alert ကို နှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြပြီး ကွန်ပျူတာဂိမ်း ခေတ်စားလာတဲ့အခါမှာ Red Alert2ကို ဂိမ်းဆိုင်တိုင်းလိုလို လူငယ်၊ လူကြီး ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် RA2 ထွက်ရှိပြီးနောက်ပိုင်း Westwood Studios ကို Electronic Arts ဝယ်ယူခဲ့သလို ခုနှစ်ခုမြောက်ဂိမ်းဖြစ်တဲ့ C&C: Generals ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Original Poster: Image (MobyGames)
စာဖတ်သူတွေ သိတဲ့အတိုင်း Generals မှာ 3D Graphics Engine အသုံးပြုထားလို့ ပိုပြီးအသက်ဝင်စေသလို Developer DICE ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် လုံးဝ Electronic Arts ဂိမ်းလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့တာပါ။
C&C: Red Alert နဲ့ ကွဲပြားမှုတွေ ရှိပေမယ့် သူ့ဟာနဲ့သူ အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်။ Generals: Zero Hour Expansion ထွက်လာတဲ့အထိ နှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြသလို C&C စီးရီးကို ထပ်မံချဲ့ထွင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း ၂၀၁၃ မှာ ဆုံးခန်းတိုင်ခဲ့ရတာပါ။
Generals2ကို Alpha Test ရောက်တဲ့အထိ ထွက်ရှိဖို့ တာဆူခဲ့ပေမယ့် Negative Feedback တွေကြောင့် နောက်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ ကြားထဲမှာ ကျနော် ဖော်ပြဖို့ကျန်ခဲ့တာ Red Alert3ပဲဖြစ်ပြီး EA ထုံးစံ Hyper-tech တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အနာဂတ်စစ်ပွဲပုံစံ ဗီဒီယိုဂိမ်းပါ။
၂၀၀၈ ၊ နိုဝင်ဘာမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး Developer EA Los Angeles ကိုင်တွယ်ထားတယ်။ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးက RA2 နဲ့ အတူတူပဲဆိုပေမယ့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို Alternate Version တမျိုးနဲ့ တင်ဆက်ထားတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
RA3 Alternate Reality
RA2 မှာ Chronosphere လို့ခေါ်တဲ့ Time-machine သုံးပြီး မဟာမိတ်တွေ အနိုင်ရခဲ့တာ သိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကို Soviet တွေက မကျေနပ်ဘဲ Time-machine ထွင်တဲ့ Albert Einstein ကို ကောက်သတ်ပလိုက်တယ်၊ သူတို့အထင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲ အောင်နိုင်သူဖြစ်မယ်ပေါ့။
တကယ်တမ်းကျ ထင်သလိုဖြစ်မလာဘဲ Rising Sun လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်တပ်မဟာကြီးနဲ့ တည့်တိုးတယ်။ တတိယ အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပြီး RA3 မှာ ဂျပန် ၊ မဟာမိတ် နဲ့ ရုရှား ၃ ဖက်ကနေ ကစားရတယ်။ Generals မှာကျ USA ၊ China နဲ့ GLA ၃ သင်းပဲ ပါဝင်ပြီး MODs တွေ အသားကုန်ထည့်နေလို့သာ တပ်မျိုးစုံဖြစ်နေတာပါ။
Red Alert3Gameplay Footage by EA (Image: MegaGames)
အခုလို တင်ဆက်ပေးတာက Command & Conquer Franchise တစ်ခုလုံးနဲ့ ရင်းနှီးသွားအောင်လို့ပါ။ စာဖတ်သူတွေထဲမှာလည်း ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ်စီ ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင် Red Alert ကို အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပြီး
Welcome Back! Commander
Electronic Arts ကြေညာပေးလိုက်တဲ့ Remastered Version ဆိုတာက Original Trilogy ဖြစ်တဲ့ C&C: Tiberian Dawns ၊ Red Alert နဲ့ Expansion Packs တွေပါ။ ဒီစီးရီး ၃ ခုလုံးကို PC အတွက် ထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပြီး Steam နဲ့ Origin Store တွေမှာ ၁၉.၉ ဒေါ်လာနဲ့ Pre-order နိုင်ပါပြီ။